Mogadishu – Page 29 – Somali Sounds
Faah faahin dheeraad ah oo kasoo baxeysa Duqeymo diyaaradeed oo xaley kadhacey Degmaayin katirsan Jobooyinka iyo degaano hoos taga Gobolka shabeelaha hoose. Duqeymahan ayaa kadhacey xaruumo waaweyn oo aad loo ilaaliyo oo alshabaab leyihiin kuwaas oo kuyaaley Degmooyinka Jilib Iyo Jamaame oo kawada tirsan Gobolada Jubooyinka iyo deegaanka xaramka ee gobolka Sh/ Hoose. Weerarkan ayaa […]
Jubaland oo hadal kasoo saartay shirka muqdisho ka furmay maanta (Aqriso)
October 1, 2019 October 1, 2019 MogadishuComment(0)
Maamulka Jubbaland ee Hoggamiyo Madaxweynaha dib loo doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ka horyimid shirka Maanta Magaalada Muqdisho ugu Furmay Dowladda Soomaaliya iyo beesha Caalamka. Wasiirka Maaliyadda Jubbaland C/rashiid Jirre Qalinle oo Warbaahinta Maanta kula hadlayay Magalada Kismaayo ayaa sheegay in habka Maamulka Jubbaland shirkaasi loogu marti qaaday uu yahay mid qaldan,isla markaana […]
DEG DEG:- Midowga xisbiyada oo muqdisho looga dhawaaqay iyo madaxweynayaal hore oo hor kacaayo
Shir xasaasi ah ayaa iminka ka socda guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha xisbiga Himilo Qaran Shariif Sheekh Axmed, kaasi oo ay leeyihiin xisbiyada siyaasadeed ee dalka. Shirka ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhammaan guddoomiyayaasha xisbiyada siyaasadda ee ugu miisaanka culus dalka. Shirkan ayaa […]
Dowladda Mareykanka ayaa war rasmi ah kasoo saartay weerarkii ay Maanta Kooxda Al-Shabaab ku qaaday Saldhigga Baledogle ee gobolka Shabeelaha Hoose kaasoo ku bilowday qaraxyo ismiidaamin ah. Mareykanka ayaa ugu horeyn cambaareeyey weerarkaas, wuxuuna Ciidamada Dowladda Soomaaliya uga mahadceliyey sida ay uga hortageen dagaalka qorsheysan ee lagu soo qaaday saldhigga ay ku leeyihiin halkaas. War […]
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay qarax Barqanimadii maanta ka dhacay inta u dhexeeysa Kullyadda Jeelle Siyaad iyo Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya gaar ahaan Suuq lagu iibiyo xoolaha oo ku yaalla meel aan sidaas uga fogeyn Kulyadda. Qaraxaas ayaa waxaa lala eegtay Kolonyo ay la socdeen Ciidamo Talyaani xili ay socdaal ku marayeen Suuq lagu […]